China Heart Foil Container HT70 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jiahua
Obi Foil akpa HT70
：Kpụrụ ： Akpa Obi
Nha ： 65x60x10mm
Ike ： 70ml
Ọkpụrụkpụ ： 0.05mm
Mbukota ： 20000pcs / Carton
Ctn Nha ： 615x315x615mm
anyị nwere ụdị iko achicha pan, mpaghara dị iche iche nwere àgwà oriri dị iche iche, yabụ anyị nwere ike dịka ihe ndị ahịa chọrọ, mepee ebu.
Allwin Pack utilizes akụrụngwa nke na-niile kwekọọ na mba gburugburu ebe obibi ụkpụrụ, niile bụ nri grade.We wuru ogologo oge mmekorita ya na ndị ahịa si North America, Europe, Japan, Australia, Asia yana ụgbọ elu, ụlọ ahịa, ọrụ nri na nri ndị na-emepụta ihe.
Foto dị na foto Nkebi Nke HT70
Mbukota 20000pcs / katọn
Ctn Nha 615x315x615mm
Obere obere & nkpuru obi obi nkpuru obi nwere obi obi puru iche emere, nke kachasi nma maka ubochi puru iche na ndi ozo
Ezigbo nnweta ọkụ. Mfe dị mfe ma sie ike, sie ike maka mkpa ịme achịcha
Mbugharị nwere ike iwepụ, tụfuo pans ndị a ma ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị maka ịsacha na ihicha
Ezigbo maka obere nri dị ka pudding, jelii, cupcake na ụdị mmadụ niile na-eje ozi
Gịnị mere Aluminium Foil?
1. Net nchekwa nke ihe onwunwe.
Aluminom foil na nri na ihe ọ packagingụ drinkụ nkwakọ ngwaahịa na-echekwa ọtụtụ ihe onwunwe karịa ka achọrọ na mmepụta ya. Usoro nyocha ndụ dị iche iche (LCAs) na-egosi na ngwugwu alufoil na foil ụlọ na-enye ihe na-erughị 10% nke mmetụta gburugburu ebe obibi na usoro ndụ ngwaahịa - Mmepụta na oriri na-adịgide adịgide.
2. Ihe mgbochi mgbochi
Aluminom foil ngọngọ mgbochi na ìhè, gas na mmiri bụ isi ihe mere ya iji na-agbanwe laminates maka nri, ọ drinkụ andụ na oru ngwa. Ọbụna mgbe ọ dị ezigbo mkpa ọ na-enye nchebe zuru oke na ichebe okpukpo na njirimara ngwaahịa. Ọ nwere ike inye aka ịgbatị ndụ nwere ike ịnwe ngwaahịa dị nro ruo ọtụtụ ọnwa, ọbụlagodi ọtụtụ afọ, na-ejigide aromas mbụ. Site na ikwe ka ngwaahịa chekwaa ruo ogologo oge na-enweghị mkpa friji, nkwakọ ihe mpempe akwụkwọ aluminom na-enyere aka igbochi mmebi ma nwee ike ịnye nnukwu nchekwa ego.
Iji kwalite nkwakọ ihe mkpuchi aluminium dị ka ozi, iji belata mmetọ gburugburu ebe obibi, iji wuo mmepe na-adigide, obere carbon na nchebe gburugburu ebe obibi nke oghere lanarị dị ka ozi.
1.Anhọrọ ọzọ maka ngwaahịa plastik na-ebelata mmetọ ọcha;
2. edbelata oke nke ihe eji etinye akwụkwọ na ngwa ngwa ndị nwere ike iwepụ na-enyere aka belata igbukpọ osisi na mmetọ nke mmiri na ụlọ ọrụ akwụkwọ;
3. Iji jikọta nkwakọ ngwaahịa alumini na-emegharị ihe ndị na-elekọta mmadụ, mmezu nke ngagharị na-adịghị agwụ agwụ nke ihe aluminom na ụzọ maka mmepe mmepe nke mba ahụ. Nke a bụ ọrụ dịịrị ndị otu anyị, dịkwa ka ntinye.
Nke gara aga: Obi Foil akpa HT02
Osote: Obi Foil akpa HT100
Aluminium Foil Containers na mkpuchi
Aluminom Foil Disposable Food Containers
Aluminium Foil Food akpa
Aluminom Foil Wepụ Containers
Alu Polygonal akpa SP2600
Obi Foil akpa HT100
Obi Foil akpa HT02
Aluminom Anụ Mmịkpọ tree BBQ1990R
Obi Foil akpa HT520